सम्पादकीय Archives - Page3of7- Prabhav Khabar
नेपाली भूमि फिर्ता ल्याऊ
इतिहासकै बलियो सरकारले आज आफ्नो मुलुकको सीमाको सुरक्षा गर्न सकेन । आफ्नो भूमिको रक्षा गर्न सकेन । योभन्दा अर्को दुर्भाग्य केही होला ? यो आजको सबैभन्दा जल्दोबल्दो प्रश्न हो । हिजो राष्ट्रवादको नारा घन्काएपछि जनताले विश्वास गरेर बहुमत दिएका हुन् । तर, उक्त पार्टी जसै सरकारमा गयो, तब उसले राष्ट्रियताको मुद्दालाई गंगामा लगेर सेलाएको छ । र, ऊ शासक मात्र बनेको छ । उसले मुलुकको माया गर्न छाडेको छ । ऊ कुु...
आश्वासन होइन, काम चाहिन्छ
सरकारले कामभन्दा बढी भाषणमा ध्यान दिएकाले आमजनता सरकारबाट दिक्दार बनेका छन् । सरकार हरेक भाषणमा कुनै न कुनै नयाँ कुरा गरेर जनतामा भ्रम छर्ने काम गरिरहेको देखिन्छ । सरकारले कम बोल्नु पर्छ तर बढी काम गर्नुपर्छ भन्नेसम्म थाहा नभएका व्यक्तिहरू सरकारमा गएका छन् । यहि पाँच वर्षमा मुलुकमै रोजगारीको प्रशस्त सम्भावनादेखि लिएर रेलसम्म भित्र्याउने वाचा गरेर जनताको मत बटुलेर सरकारमा गएको पार्टीले आफ्ना वाचा प...
ओज नभएको भाषण
अहिले नेताहरूमा ओज हराएको छ । जनताको नाममा शक्ति हातमा लिएपछि नेताहरूमा अराजकता बढेको देखिन्छ । झन् पछिल्लो समयमा त सरकारमा बस्नेले जे पनि बोले हुने अवस्था आएको छ । पूरा नगर्दा पनि केही नहुने भएपछि उसका लागि बोल्नुको कुनै अर्थ छैन । सत्तारुढ दलका कार्यकर्ताले सरकारको सुरक्षा गर्ने भएपछि नेताहरूमा बोल्न ठूलो कुरा रहेन । बाँकी रह्यो, जनता । अहिले मुलुकमा जनता देखिँदैनन्, सबै नागरिक कुनै न कुनै पार्ट...
प्रहरीमा इच्छाशक्ति जाग्ने कहिले ?
हरेकपटक आउने गृहमन्त्री र प्रहरीका प्रमुखले शान्ति, सुरक्षा मात्र नभएर अब प्रहरी साँच्चिकै जनताको पक्षमा लाग्ने बताउँदै आएका छन् । खासगरी प्रहरीमा बढुवाका लागि ब्रिफकेस लिएर नेता वा शक्ति केन्द्र धाउने संस्कार बसेपछि मुलुकमा न्याय मरेको छ । गृहमन्त्रीको नाममा आफन्तले गुन्डागर्दी मात्र होइन, अपहरणजस्तो गम्भीर अपराधमा संलग्न भएपछि गृहमन्त्रीको शान्ति सुरक्षाको कुरा केवल भएको देखिन्छ । त्यसमाथि प्रहर...
दाइजोविरुद्ध जनचेतना आवश्यक
दाइजो भन्नेबित्तिकै ज्यानमाराका रूपमा लिइन्छ । पहाडी भेगमा दाइजोको उत्तिसारो बिगबिगी नभए पनि तराई क्षेत्रमा भने यस्ले जरो गाडेर बसेको छ । तराईमा संस्कारका रूपमा जरो गाडेको दाइजोले हज्जारौँ चेलीहरूले ज्यान गुमाएका छन् । हुने खानेहरूका कारण पछिल्लो समयमा यसले विकराल रूप लिँदै आएको छ । गरिबहरूका लागि दाइजो प्रथाले छोरीको विवाह गर्न सक्ने अवस्थामा देखिएको छैन । दाइजो दिनुपर्ने पक्षहरू चिन्तामा डुबेका ...
एमसिसी अनुमोदन गलत
जे भनिए पनि एमसिसी कुनै पनि मूल्य र मान्यतामा गलत छ । हुन त यसलाई अनुदान भनी प्रचार गरिएको छ । चाहे अनुदान होस् या ऋण, विदेशी सहायतालाई स्विकार्ने संस्कार अब बन्द गरिनुपर्छ । एमसिसी नेपालले स्वीकृत गरे पनि यसको प्रत्यक्ष फाइदा सोही अमेरिका, सरकार र सरकारमा बस्नेको आसेपासेहरूले लिने छन् । गरिब जनताको घर दैलोसम्म नपुग्ने सहयोग नेपालले स्वीकार गर्नु गलत हुनेछ । नेपालको विकास गर्न नेपाली जनताले तिरेको...
उद्दारमा ढिलाइ नगर
सरकारले चीनमा रहेका नेपाली विद्यार्थीलाई उद्दार गर्न सकेको छैन । आज र भोलि भन्दाभन्दै हप्ता दिन बितिसक्दा पनि सरकारले उनीहरूलाई उद्दार गर्न सकेको छैन । चीनको वुहानबाट फैलिएको कोरोना भाइरसको त्रासमा रहेका नेपाली विद्यार्थीलाई सरकारले उद्दार गर्नुको साटो उनीहरूलाई काठमाडौंमा ल्याएर राख्ने स्थानको खोजी गरिरहेको छ । उनीहरूलाई ल्याएर भक्तपुरको खरिपाटीमा राख्न खोजिएको भए पनि स्थानीय तहले मानेको छैन । यत...
धरहरा पुनर्निर्माण ढिलाइ नगर
भूकम्प गएको पाँच वर्ष पुग्न लागेको छ । तर, सरकारले अझै पुनर्निर्माणको काम पूरा गर्न सकेको छैन । सरकारले पुनर्निर्माणका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण बनाए पनि यसमा राजनीति घुस्दा यसले आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न सकेन । बरु सरकारले पटक–पटक मुख्य कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) फेर्ने काम गर्न पछाडि परेन । यहि पदमा दुई जना सिइओ फेर्ने क्रम चल्यो । जुन सरकार आयो, उसकै निकटका व्यक्तिलाई सिइओ बनाएर सरकारले...
अख्तियार गलत बाटोमा
साँच्चै भन्ने हो भने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विधिको शासन तोडेको देखिन्छ । सत्तामा बस्नेलाई माफी दिने र सत्ता बाहिरकालाई भने मुद्दा लगाउने संस्कार अख्तियारले बसालेको छ । एक जनाले जग्गा फिर्ता दिन्छु भनेको भरमा मुद्दा नलगाइनु सबैभन्दा ठूलो गल्ती भएको छ । कसैले नदेखे चोर्ने तर कोही कसैले देखेमा जिस्केको भनेर टार्ने हो भने यो त सबैभन्दा ठूलो बद्मासी हो । यसरी नक्कल गर्नेलाई झन् ठूलो सजाय दि...
सरकारी जग्गा हडप्नेलाई छुट नदिइयोस्
लोकतन्त्रमा कानुनी राज्यको कल्पना गरिन्छ । कानुनभन्दा कोही माथि नहुनु पर्ने बेलामा राजनीतिक पार्टीहरूले यसलाई लत्याएर आफू मात्र सर्वैसर्वा बनाउन लागेका छन् । कुनै बेला ज्यानमाराको आरोप लाग्नेबित्तिकै उसलाई सार्वजनिक पदमा बस्न दिइँदैनथ्यो । तर, नेता भन्नेबित्तिकै अहिले सबै छुट दिने वा पाउने चलन बस्न लागेको छ । यसले कानुनी राज्यको उपहास गरेको छ । अहिले नेताहरूलाई कानुन नलाग्ने भएकाले जनताले लोकतन्त्...